औषधिको पछाडि हुने रातो धर्काको अर्थ के हो ? जान्न आवश्यक- – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /रोचक/औषधिको पछाडि हुने रातो धर्काको अर्थ के हो ? जान्न आवश्यक-
औषधिको पछाडि हुने रातो धर्काको अर्थ के हो ? जान्न आवश्यक-
690 Less thanaminute
एजेन्सी। हामीले सुनेकै-बुझेकै छौंः डाक्टरको सुझाव बिना औषधि खानु हुँदैन। व्यवहारमा यो लागू नगर्नेहरू भने धेरै छौं। टाउको दुखेदेखि झाडावान्तासम्म कुन औषधि खाने भन्ने धेरैलाई ‘कन्ठ’ भइसकेको छ। यति थाहा नहुनेहरूका लागि अर्का विज्ञ ‘मेडिकल सञ्चालक’ हुन्, हाम्रा डाक्टर उही। यसरी जथाभावी औषधि किनबेच र खाने गर्नुहुँदैन भन्ने हामीले नबुझेको होइन। डाक्टरहरूले पनि भन्छन्। अझ हरेकजसो औषधिमा लेखिएको हुन्छ।
यति मात्रै होइन, जथाभावी खाँदा गम्भीर जोखिम आइपर्ने सम्भावना भएका औषधिमा त विशेष संकेत पनि हुन्छ। तपाईंले एकप्रति ट्याब्लेट औषधिको पछाडि हेर्नुभयो भने अधिकांशमा रातो धर्का देख्न सक्नुहुन्छ, दुखाइ कम गर्ने कडा औषधि र एन्टिबायोटिक्समा विशेषगरी। यिनको खोलमा पनि यस्तो धर्सा हुन्छ।
यो भनेको के त? – डाक्टरको सुझाव वा प्रेसक्रिप्सनबिना खान नहुने। हालै भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि यसबारे जानकारी दिँदै जथाभावी औषधि नखान सुझाएको थियो। मन्त्रालयको ट्विटरमा ‘रातो धर्का भएका औषधि डाक्टरको सल्लाह बिना नखानुस्। तपाईं जिम्मेवार भए औषधिले पनि राम्रो काम गर्छ।’
मुम्बई मिररका अनुसार खासमा यो रातो धर्सा भएको औषधि मेडिकल पसलहरूमा पनि डाक्टरको सुझाव लेखिएको पत्रबिना बेच्न पाइँदैन। त्यसैले ध्यान पुर्‍याउनुहोस्, चेतावनीसहित आएको ‍औषधि यसै खाँदा ज्यानलाई राहतको साटो जोखिम बढी होला!
एकैरात २ यौ’नकाण्ड: २३ बर्षिय महिलासंग प्रहरी हवल्दार रंगेहात, श्रीमान् अर्कैको श्रीमतीसंग !
पासो लगाएर सामूहिक ‘गौंह-त्या’! आधा दर्जन गाईको कंकाल झुन्डिएको अवस्थामा
श्रीमती गर्भवती भएपछि श्रीमानको भूमिका के हुन्छ ?
केही कुरा याद हुँदैन ? यी आठ तरिकाले बढाउनुहोस् दिमागको क्षमता
राति चन्द्रमामा देखियो फरक रङ, खगोल शास्त्रीका विभिन्न अनुमान